​दक्षिण कोरियामा बढ्यो मजदुरको तलब, अब कति कमाउँछन् नेपालीले ?
Saturday, 14 Jul, 2018 2:32 PM
३० असार, काठमाडौं । दक्षिण कोरिया सरकारले आफ्नो देशमा कार्यरत श्रमिकको तलब बढाउने निर्णय गरेको छ । शनिबार सम्पन्न त्यहाँको पारिश्रमिक निर्धारण समितिको बैठकले कामदारहरुको तलब १०.९५ प्रतिशत बढाउने निर्णय गरेको हो । तर, यो निर्णय लागु भने सन् २०१९ देखि हुने छ ।
नेपालीको हकमा के हुन्छ ?
दक्षिण कोरियामा धेरै नेपाली मजदुर छन् । इपिएस कोटामा गएका नेपाली मजदुर पछिल्ला वर्ष ह्वात्तै बढेका छन् । उनीहरुको हकमा पनि बढेको तलबको नियम लागु हुने छ । यो निर्णय ईपिएसलगायत सम्पूर्ण कामदारको हकमा लागू हुनेछ । यो निर्णयले कोरियामा ४० हजार बढी नेपाली लाभान्वित हुने भएका छन् ।
कति हुने भयो तलब ?
बढेको तलबअनुसार अब कामदारको तलब प्रति घण्टा ८३५० कोरियन वोन अर्थात दैनिक आठ घण्टा काम गरेपछि कामदारको महिनाको न्यूनतम तलब नेपाली १ लाख ६८ हजार बराबर हुनेछ ।
सन् २०१९ का लागि तय गरिएको न्यूनतम ज्याला वर्तमान राष्ट्रपति मून जेइनले राष्ट्रपति निर्वाचन ताका गरेको प्रतिबद्धता अनुरुप भएको समाचारमा जनाइएको छ ।